12 Pụrụ Iche Home Peeji Ihe | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 29, 2012 Tuesday, May 3, 2016 Douglas Karr
Hubspot bụ n'ezie onye ndu na-ebu ọdịnaya iji mee ka usoro azụmaahịa inbound pụta, Ahụtụbeghị m otu ụlọ ọrụ wepụrụ ọtụtụ akwụkwọ akụkọ, ngosi na akwụkwọ ntanetị. Hubspot ugbu a na-anapụta ihe infographic ihe iri na abụọ dị nkpa nke otu mbido.
Ibe obibi kwesiri iyi otutu okpu ma jeere otutu ndi mmadu ndi si otutu ebe. N'adịghị ka peeji nke ọdịda raara onwe ya nye, ebe a ga-enye okporo ụzọ sitere na ọwa pụrụ iche ozi kapịrị ọnụ iji mee ihe. Ibe ndabata nwere ọnụ ọgụgụ ntụgharị ka elu n'ihi na echere ha ma bụrụkwa nke kacha mkpa nye onye ọbịa.
Anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka ịwulite usoro ịre ahịa inbound… na m ga-ekwu na m chere Hubspot Agbaghara akara na infographic a… enwere ụfọdụ ihe dị mkpa na atụmatụ agbaghara na infographic a:
Ozi mkpọtụrụ - oku na-eme bu ihe omuma di nkpa, mana obughi onye obula choro igha aka na ngosi ma obu ihe ndi ozo. Mgbe ụfọdụ gị ahịa dị njikere ịzụta na nanị chọrọ a nọmba ekwentị or ntinye akwụkwọ ka malitere.
Akara Omenala - a gaghị eleghara mkpa nke mgbasa ozi mmekọrịta na-azụlite onye ahịa anya. Mgbe ụfọdụ folks ga-ada na saịtị gị, mana ha adịghị njikere ịzụta ma yet yabụ ha ga-eso gị na Facebook, Google+ ma ọ bụ Twitter iji mara gị nke ọma.
Akwụkwọ ndebanye aha - ikekwe ihe elelị kachasị nke homepage ọ bụla bụ ndenye aha akwụkwọ ozi. Inye ụzọ maka atụmanya ịbanye adreesị email ha ma bụrụ ugboro ugboro metụrụ aka na ozi, enye na ozi site na ika gi adighi onu. Ptchọta adreesị ozi-e bara ezigbo uru - gbaa mbọ hụ na ọ dị mfe ma doo anya na ibe obibi gị.
Aga m agbagha iji okwu ahụ atụmatụ na # 5 nakwa. Egosiputala ya na ndi oru ozo dọtara mmasị karịa uru. Ekwu okwu banyere gị ọhụrụ-fangled akuko adịghị mkpa… ma na-egosi na ndị bara uru data na ị na-eweta otú ụlọ ọrụ nwere ike ime ka ego bụ!
N'ikpeazụ, a ga-eme ka ebe obibi gị kachasị maka isiokwu ndị ga-edepụta saịtị gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma hụ na achọtara saịtị gị ka ọ na-eto eto. SEO kwesiri itinye aka na mbido ụlọ gị na mmepe.
Tags: ihe maka homepagemmebe ụlọhomepage ọchaotúokpokoro
Bụ eziokwu! na naanị ụbọchị abụọ azụ natara mmelite sitere na Google banyere mkpa ọ dị ọdịda peeji. Ya mere ọ bụrụ na mmadụ na-agba ọsọ mgbasa ozi njikarịcha, Ọ dị mkpa ịnwe ndepụta ziri ezi nke isiokwu na ibe kwesịrị ekwesị ebe isiokwu ndị ahụ ga-akpọrọ anyị ..
Audrey Howes kwuru
Jenụwarị 31, 2012 na 12:56 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ọrụ gị. Achọrọ m nke abụọ n'okwu gị na ndenye aha akwụkwọ akụkọ! Ọ na-eju m anya otu m ga-esi gwupụta iji chọta ndebanye aha na ụlọ ọrụ m chọrọ ịnụ.
Jenụwarị 31, 2012 na 5:18 PM
Ekwenyere m na otu n'ime ihe kachasị mkpa na ibe akwụkwọ a bụ akara ngosi mmekọrịta. Ekwenyere m na e kwesịrị inwe akara ngosi abụọ nke akara ngosi mgbasa ozi mmekọrịta na ibe ọ bụla-otu maka ụlọ ọrụ, ngwaahịa ma ọ bụ mkpokọta weebụsaịtị yana onye ọzọ maka peeji ụfọdụ ma ọ bụ isiokwu onye ọrụ na-eleta.